'नेहरुले चिठी लेखेर अनुरोध गरेपछि कालापानीमा भारतीय सेना बस्न दिइएको हो'
विश्वबन्धु थापा आइतबार, जेठ १८, २०७७, १५:१५
काठमाडौं- भारतले एकतर्फी रुपमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल-भारतबीच पछिल्लो असझदारी सुरु भएको छ। गत वैशाख २६ गते उसले नेपाली भूमि हुँदै निर्माण गरेको सडक उद्घाटन गरेपछि त त्यो असमझदारी झनै उत्कर्षमा पुगेको छ। भारतीय गतिविधिको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपालले पनि आफ्नो अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। र, संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भारतसँगका सम्बन्ध र नेपाली भूमिका उसको सैनिकको उपस्थितिका सम्बन्धमा नेपाल लाइभका लागि डिबी खड्काले तत्कालीन राजा महेन्द्रका सहयोगी विश्वबन्धु थापासँग कुराकानी गरेका छन्। महेन्द्र, जसको बलियो प्रभाव रहेको बेलामा भारतीय सैनिक नेपाली भूमिका बस्न सुरु गर्‍यो। त्यसको कारण के हुनसक्थ्यो? वा, रणनीति के हुनसक्थ्यो? नेपाल-भारतका बाध्यता वा समझदारी कस्ता थिए? भन्ने जस्ता कोणबाट थापासँग कुराकानी गरिएको छ।
भिडिओमा विस्तृत कुराकानी हेर्न र सुन्न सकिन्छ। प्रस्तुत छ, थापाका धारणाहरुको सम्पादित अंशः
नेपाल भारतको सिमानामा समस्या छैन। अहिले धेरै चर्चा भएर आएको हो। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अर्कै तहको हो। जंगे पिल्लर राख्दैमा हाम्रो सम्बन्ध छेकिँदैन। नेपाल र भारत त विश्वासको पिलरले छुट्टिएका हुन्।
मैले झापामा हेर्दा पहिले जंगे पिल्लर देखिँदैन थियो। अहिले सरेर सहर नजिकै आइसकेको छ। अब यी सबै कुरा हेर्न सुगौली सन्धिमा जानुपर्छ। यो हामीले हारेको वा जितेको जे भए पनि त्यो एकप्रकाकारको सन्धि थियो। तराई ब्रिटिशले राख्यो र पहाड हामीलाई दियो। तर, तराईका केही भाग पछि हामीलाई फेरि आयो।
जंगबहादुर राणाले ब्रिटिशलाई खुसी पारेका थिए। नयाँ मुलुक उनले माग गरेका कारण पाएको हो। पहिला नेपाल भनेको काठमाडौं नै हो । हामी यहाँ आउँदा पनि काठमाडौं नै थियो। यहाँ राणाले हामीलाई मान्छे होइन, जन्तु भन्थे। मुखिया र जिम्मावालले चलाएको देश थियो। यहाँ सरकार नै थिएन।
२००७ सालको क्रान्तिपछि मात्र नेपालमा आधुनिकीकरणको इतिहास सुरु भयो। त्यसपछि मात्र प्रहरी र सेनाको स्थापना भएको हो।
अहिलेको विवाद मानसरोवर जाने उद्देश्यबाट सुरु भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनसँग मानसरोवर बाटो बनाउने भनेर सहमति गरेको देखिन्छ। चीनले पनि लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सोचेको हुनसक्छ। यी नाका खुल्दा भारत र चीन दुवैलाई फाइदा हुने भएपछि यो सहमति उनीहरुका बीचमा भएको हुनसक्ने देखिन्छ।
यो सहमतिका विषयमा नेपाललाई जानकारी नभएको होइन। सरकार झुक्किने कुरा हुँदैन। अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ, यसलाई हल्लाखल्ला गर्न पाए आफ्नो छवि उज्यालिन्थ्यो भनेर गरेको पनि हुन सक्छ। तर, जे भए पनि यो राम्रै भएको छ। यो भूमि नेपालकै हो नेपालले आफ्नो दाबी गर्नुपर्छ।
चीन र भारतका बीचमा युद्धमा हुँदा म ठ्याक्कै कुन पदमा थिएँ, बिर्सें। मेरो नेतृत्वमा चीन भ्रमण भएको थियो। माओ र चाओ लिनलाई भेटेको थिएँ। त्यो बेला माओले हामीलाई राम्रै रुपमा लिएका थिए। उनीहरुलाई पनि भारतसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने थाहा थियो। हाम्रो सेना ब्रिटिश र भारतमा पनि भएको मैले जानकारी गराएका थिएँ। भारतीय नेपाली गोर्खा सेनालाई माया गरेर राख्न भनेको थिएँ। इतिहासका कारण उनीहरुसँग हाम्रा नागरिका भारतीय सेना भएको बताएको थिएँ। माओले मलाई जिस्काएर माया गरेर राखेको भन्दै दशैंका बाजा बजाएर नाच्ने गरेको बताएका थिए।
सन्धिको कुरा प्रष्ट नै छ। ब्रिटिशसँग गरेको सुगौली सन्धि नै छ। महाकाली कुन हो भन्ने कुरा लेखिएकै छ। पञ्चेश्वरमा ठूलो बिजुली निकाल्ने भनिएको थियो। त्यो समयमा पनि कुन खोलावाट पानी आउँछ र खोला कहाँ छ भन्ने लेखेकै होला। अब यो विषयमा पनि छलफल नगरौं।
अब जाउँ कालापानीमा भारतीय सेना किन बस्यो। हाम्रो र भारतको धेरै पुरानो सम्बन्ध छ। राजा त्रिभुवन भागेर कहाँ गए? दिल्ली। यहाँका नेता कहाँ बसे? दिल्ली। त्रिभुवन फर्केर यहाँ आउँदा उनको सहयोगी को थियो? भारतीय। त्रिभुवन राजपथ कसले बनाइदियो? भारतले। यी यस्ता सम्बन्ध भारतसँग इतिहासदेखि नै थियो। कोदारी राजमार्ग निर्माण चीनले चाहेको थियो। बिपी कोइरालाको चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो। उनले कोदोरी बनाउन चाहेपछि तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री ज्वाहरलाल नेहरुले पत्र लेखेर रोकेका थिए।
सन् १९६२ मा चीन र भारतका बीचमा युद्ध भयो। अरुणाञ्चलमा भारतले नमानेपछि यो विवाद भएको थियो। कस्मिर, लद्दाख र अक्साई चीन जस्ता भागमा भारत र चीनका बीचमा विवाद थियो। त्यही सेरोफेरोमा भारतीय सेना कालापानी आइपुगे। चीनसँग युद्धका समयमा भारतीय सेना माथि टाकुरामा थिए। हिउँ पर्न थालेपछि उनीहरुलाई तल आएर बस्नुपर्ने थियो। उनीहरुले नेपालको कालापानीमा आँखा लगाए। आसाममा हारेपछि नेहरु स्तब्ध थिए।
नेपालको कालापानी चौरमा बस्न उपयुक्त हुने उनीहरुले महसुस गरे। कालापानी खालि जमिन थियो। जवाहरलाल नेरुले महेन्द्रसँग कुरा गरे। यहाँ पनि महेन्द्रलाई कांग्रेसहरुले दुःख दिइरहेका थिए। चीनसँग नजिकिँदा भारतलाई शंका थियो। बिरामी नेहरु, त्यसैमाथि चीनसँग हारेको पीडा आदि समयमा भारतसँग सम्बन्ध कायम राख्न भए पनि कालापानीमा सेना बस्न दिइयो। नेहरुले राजा महेन्द्रलाई चिठी लेखेरै कालापानीमा अस्थायी रुपमा भारतीय सैनिक बस्न मागेका थिए। ल होस् न बसुन्, दुःख पाएका छन् भनियो। बिस्तारै त्यहाँ भारतीय सैनिकले क्याम्प बनाए।
अहिले आएर उनीहरुले नयाँ काली नदी र नयाँ मन्दिर बनाए। बाटो बनाए। अब उनीहरुले बाटोभन्दा उता तिम्रो यता हाम्रो भन्न सक्लान्। यो रकमी कुरा मात्र हो।
उनीहरुको भूभाग थियो त्यो भने किन नेहरुले हामीलाई पत्र लेख्नुपर्‍यो? नेपालकै हो भनेर त बस्न अनुमति माग्न लेखेको हो नि।
शारदा बाधमा ब्रिटिशले के भनेको थियो त्यो पनि हेर्न जरुरी छ। शारदा बाँध अहिलेको होइन। पञ्चेश्वरमा सहमति गर्दा महाकाली कहाँ भनिएको छ? नक्कली कि सक्कली भनिएको छ?
राजा महेन्द्र भएको समयमा दिल्ली पहिलोपल्ट दरबारबाट टाढा भएको थियो।
भारतले हामीलाई थिचोमिचो गर्न हुँदैन। हाम्रो विश्वासको नाता हो। उसले घात गर्न मिल्दैन।
राजा महेन्द्रले माओसँग सगरमाथा हामीलाई दिनुभयो भने नेपाली खुसी हुन्छन् भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसको जवाफमा माओले नेपालका करोड खुसी होलान्। आफूलाई दिइयो भने सय करोड चिनिया खुसी हुने जवाफ दिएका थिए। त्यो आधा आधा गर्नेुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका थिए। चीनले पछि हामीलाई दियो। मुस्ताङमा पनि यस्तै कुराकानी भएको थिए तर चीनले विवाद गरेन।
अब फर्काउन के गर्नुपर्ला त? यसलाई बाघचाल र बुद्धिचालसँग दाँजेर हेर्न जरुरी छ। बाघचालमा बाख्राले बाघ घेर्न सक्छन्। हामीले बाघचाल खेल्ने हो। बुद्धिचालमा भारत अगाडि हुन सक्छ। किनकी उसँग सबैथोक छ। महात्मा गान्धीले बाघचाल खेलेका थिए। उनले ब्रिटिशलाई बाघचालमै हराएका हुन्। जनता साथ लिएर उनले जसरी ब्रिटिशलाई फर्काए, अब हामीले पनि यसैगरी बाघचाल खेल्नुपर्छ।
जनतालाई साथ दिएर खेल्ने हो भने यो सहज रुपमा जितिन्छ। विराटनगरको कोशी ब्यारेजको कार्यालय बन्द गराउन त हामीलाई मुस्किल भएको थियो। त्यो कार्यालय हटाउन हामीले धेरै संघर्ष गरेका थियौं। यसलाई अझ सरलसँग बुझ्न नेपालमा आएको भूकम्पसँग तुलना गरौं। भूकम्प आयो, मेरो घरमा केही आश्रय खोज्दै आए। किनकि मेरो घरको आंगन सुरक्षित थियो। मैले उनीहरुलाई आश्रय दिएँ। उनीहरुलाई दिएको आश्रयको आधारमा दाबी गर्न त मिलेन नि।
त्यसैले भारतीय सेनालाई केही समयका लागि हामीले दिँदैमा त्यो भूमि उनीहरुको भएको होइन। सानो देश छ भन्दैमा यस्तो कुरा गर्न भारतले मिल्दैन। भारत र हामी भाई–भाई होइनौं। हामी त छिमेकी मात्र हौं। भारतका भाईहरु त पाकिस्तान र बंगलादेश हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाठो मान्छे हो भन्ने मैले वुझेको छु। उनी जुनसुकै चाल खेल्न सक्ने देख्छु। पार्टीभित्रको अन्तरकलह मिलाउनुस् भनेर पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसँग आग्रह गर्दछु। पुष्पकमल दाहाल त धेरै चतुर छन्। यी सबै मिलेर नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनेतिर लाग्नुपर्छ। मेरो सुझाब लडाइँ भइसकेपछि जवानलाई गोली हान्न सिकाउने होइन। जति सिकाउनुपर्ने हो, त्यो तालिमकै समयमा सिकाउनुपर्‍यो। लडाइँ नै भइसकेको पछि उनीहरुको कौशलले लड्न साथ दिऔं। अहिले ओलीलाई पनि सिकाउने भन्दा पनि साथ दिनु हाम्रो हितमा छ।
(थापासँग डिबी खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)